Tunisia inyika iri muAfrica.
National motto: نظام، حرية، عدالة
Algeria inyika iri muAfrica. Guta guru reAlgeria rinonzi Alger.
Angola inyika iri kuchamhembe kweAfrica, inoganhurana neNamibia iri kuchamhemb; Democratic Republic of Congo kumaodzanyemba; Zambia kumabvazuva; neGungwa reAtlantic kumadokero. Gutaguru reAngola rinonzi Luanda. Chimwe chikamu chiduku cheAngola chinonzi Cabinda chinoganhurana neRepublic of Congo neDemocratic Republic of Congo.
Benin inyika iri muAfrica.
Egypt inyika iri kumusoro kweAfrica panosangana Africa neAsia. Nyika iyi inozivikanwa nematumba akavigwa madzimambo vainzi vana Pharaoh muBhaibheri
Gabon inyika iri muAfrica.
Ghana inyika iri muAfrica. Guta guru renyika iyi rinonzi Accra. Mutungamiri wenyika wokutanga munyika iyi ainzi Kwame Nkrumah. Vakawana kuzvitonga kuzere mugore ra1957.
Guinea inyika iri muAfrica.
Kenya inyika iri muAfrica. Guta guru rinonzi Nairobi.
Liberia inyika iri muAfrica.
Madagascar inyika iri muAfrica.
Mauritius inyika iri muAfrica.
Morocco inyika iri muAfrica.
Mozambique inyika iri kuChamhembe kwadziva kuMabvazuva kweAfrica. Nyika dzakaikomberedza dzinoti: Tanzania iri kumaodzanyemba; Malawi neZambia dziri kuMaodzanyemba kwakadziva kuMadokero; Zimbabwe iri kumadokero; Swaziland neSouth Africa dziri Chamhembe kwakadziva kuMadokero. Kumabvazuva kwayo inoganhurana neGungwa India. Mozambique inopatsanurana neMadagascar paMuronga weMozambique. Guta guru reMozambique rinonzi Maputo. Manika iri pedyo ne guta reMutare. Mutungamiri wekutanga wenyika iyi ainzi Samora Machel.
Nigeria inyika iri muAfrica. Guta guru racho iLagos.
Senegal inyika iri muAfrica.
Seychelles inyika iri muAfrica.
South Africa inyika iri muAfrica.
South Africa inotungamirirwa navaCyril Ramaphosa vebato reANC. Guta guru remunyika iyi rinonzi Pretoria. Zvakadaro hazvo, VaRamaphosa havagari muguta iri sezvinoitwa naVaMnangagwa vemuZimbabwe vavakaganhurana navo. VaRamaphosa vanogara muJoburg, munzvimbo inonzi Sandton.
South Africa senyika ine mitauro nemarudzi akawanda zvikuru. Mitauro inosanganisira ChiXhosa,ChiZulu, ChiPeri, ChiNdebele,ChiTswana,ChiVhenda, Chirungu, ChiAfrikana, ChiFurenji nemimwe yakawanda. Chinondifadza ini semunyori nemupepeti wechinyorwa chino ndechekuti, nyika iyi inobvumidza zvizvarwa zvayo kushandisa zvakakwana mitauro yavo. Marodhi, nzvimbo, migwagwa mizhinji yakanyorwa nemitauro yevanhu ava.
Sudan inyika iri muAfrica.
Kana uchitsvaga zvakawanda nezvokuvhota gore ra2008, ona nyaya iyi.Zimbabwe (madanirwo /zɪmˈbɑːbweɪ/), ichinzizve Republic of Zimbabwe, uye yakambozivikanwa seSouthern Rhodesia, Republic of Rhodesia uyezve Zimbabwe Rhodesia, inyika yakakomberedzwa nedzimwe iri kuchamhembe kweAfrica.
Kumabvazuva kuneMozambique, kuchamhembe kune Chamhembe Africa, kumadokero kune Botswana, kumawodzanyemba kuneZambia. Mutauro wevakambopamba nyika Chirungu (English) asi ruzhinji rwevanhu munyika iyi runotaura ChiShona. ChiShona mutauro wevanhu vakagara munzvimbo iyi kubva makarekare. Rurimi rweSindebele rwunotaurwawo zvakare muZimbabwe nevanhu veMatabele. Ava vanhu vakasvikawo munzvimbo iyi apo veChiShona vanga vatodzika midzi. VeMatabele ava vaibvawo nechekuchamhembe uko vaitiza ishe wavo Shaka Zulu uyo aida kuvatonga ivo vasingadi kutongwa naye
Zvakare kuchamhembe kwenyika iyi kune rwizi rukuru rwunonzi Limpopo, ukuwo kumawodzanyemba kunezve rumwe rwizi rukuru runonzi Zambezi. Nzizi idzi ihuru kwazvo uye dzinodira mugungwa reIndian Ocean.
Kubvira makore 1250 kabanga kuzvika 1629, nzvimbo yavekuzikanwa seZimbabwe iyi yaitongwa nemadzimambo eMutapa (Mutapa Empire), vachizikanwazve sekuti Mwene Mutapa, Monomatapa kana kuti pachirungu Empire of Great Zimbabwe. Nzvimbo iyoyi yaive nemukurumbira chaizvo panyaya dzendarama (Goridhe), iro raifambiswa nevanhu vechiArab. Zvakadaro, vechiPutukezi (Portuguese) vakauya ndokuparadza hurongwa ihwohwo nokukasira, zvikasiya Monomatapa iri panguva yekusaziva zvekuita .
Gore ra1834 veMatabele, ava vanga vakuzviti maNdebele, vakasvikawo munzvimbo iyoyi yamadzimambo Mutapa. Vakasvika nechekuchamhemhembe kwakadziva kumadokero (South West) kwenzvimbo yamadzimambo Mutapa. Tambo taura pamusoro kuti vanhu ava vakange vari kutiza kubva kunamambo wavowo Shaka ainge arikudya marasha chamhembe ikoko. VechiNdebele ava vaitungamirwawo namambo wavo Lobengula. Nzvimbo yavakagara iyi yaizozikanwa seMatabeleland munguva yaizotevera kusanginisira zvino uno.
Nyika yeZimbabwe yakawana kuzvitonga mugore ra1980, apo bato reZanu-PF raRobert Gabriel Mugabe rakavhoterwa neruzhinji rwevanhu. Mureza weBritain wakadzikiswa musi wa18 April 1980, mureza weZimbabwe ukasimudzwa. VaMugabe vakatonga nyika iyi kwemakore anopotsa makumi mana. Mushure mekudaro, mutevedzeri wavo Emmerson Mnangagwa akatora chinzvimbo chazvo mushure mekunge va Mugabe vamanikidzwa kuti vasiye basa. Emmerson Mnangagwa uyu haana kuzvitorera chigaro ega, akabatsirwa nemauto uyezve aiva nerubatsiro rwebato raitonga rinova Zanu Pf. Iri ndiro bato richirikutonga munyika ye Zimbabwe zuva ranhasi. Emmeson Mnangagwa akatpinda pachigaro mugore ra 2017 mumwedzi wa Mbudzi, netarisiro yekuti gore raitevera paitwe sarudzo yekutsvaga mutungamiri wenyika anodiwa nevanhu. Ruzhinji rwakamusarudza zvakare asi pakaita mutauro nemutungamiriri webato rinopikisa MDC rinotungamirirwa na va Nelson Chamisa. Myaya iyi yakanetsa ikatozoenda kudare redzimhosva rinoona nenyaya dzebumbiro remitemo. Nyaya ya Va Chamisa yekupikisa zvakabuda musarudzo yakaonekwa nedare isina humbowo, dare rikati Emmeson Mnangawa ndiye akasarudzwa neruzhinji.